Saturday October 06, 2018 - 08:50:14 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa markale ku dhaqaaqday tallaab ah dowlado shisheeye ugu ogolaanayso in ay daabushaan Kheyraadka dalka Soomaaliya.
War rasmi ah oo kasoo baxay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo daaqa ayaa lagu sheegay in safaaradda Dowladda Qadar ee magaalada Muqdisho loo ogolaaday in Soomaaliya ka dhoofsan karto xayawaanka duurjoogta Sagaarada.
Arrintan ayaa qeyb ka ah silsilado heshiisyo ah oo kheyraadka dalka loogu gacan gelinayo dowlado shisheeye oo ay ku tallaabsatay dowladda uu madaxda ka yahay Max'med Cabdullaahi Farmaajo.
Bishii Shawaal ee lasoo dhaafay ayuu Farmaajo Abiy Axmed usaxiixay heshiis Itoobiya siinaya illaa Afar dekadood oo kamid ah dekadaha dalka Soomaaliya arrinkaas oo shacabka Soomaaliyeed si aad ah uga dhiidhiyeen.
Dowladda Qadar ayaa la rumeysanyahay in ay lacago Malaayiin dollar ah ku bixisay Doorashadii Farmaajo uu ku noqday Madaxweynaha dowladda Federaalka sidoo kale Qadar waxay galaangal siyaasadeed ku dhax leedahay Villa Somalia.
Waxaa xusid mudan in wilaayaatka Islaamiga ah ee dhaca Koonfurta iyo Bartamaha dalka ay Xarakada Al Shabaab ka mamnuucday in sifo sharci darra ah lagu ogaarsado ugaadha nuucyadeeda kala duwan in dibadda loo dhoofiyo iskaba daaye, wilaayaatka Jubbooyinka iyo Sh/hoose oo kamid ah meelaha ugu duur joogta badan Soomaaliya lama ogala in ugaarta ladilo ama dibadda loo dhoofiyo si looga hortago Nabaad guur.
Madaxda DF ayaa caan ku ah in shisheeyaha ay kula saaxiibaan dhulka iyo kheyraadka dalka, waxaa xusid mudan in kumanaan ciidamo ajnabi ah oo dalka duullaan ku jooga ay ku yimideen ogolaashiyaha madaxda Dowladda Dabadhilifka ah ee fadhigeedu yahay Muqdisho.